ग’र्लफ्रे’न्डका बारेमा अ’पशब्द बोलेपछि ढु ङ्गाले हा नेर सा’थीको ह त्या ! – AB Sansar
ग’र्लफ्रे’न्डका बारेमा अ’पशब्द बोलेपछि ढु ङ्गाले हा नेर सा’थीको ह त्या !
October 25, 2020 October 25, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on ग’र्लफ्रे’न्डका बारेमा अ’पशब्द बोलेपछि ढु ङ्गाले हा नेर सा’थीको ह त्या !
भक्तपुर । भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका–२, इटापाको प्लानिङस्थित नरकटघारी खो\_ल्सामा फेला परेको श’वको स’ना’खत भएको छ । आइतबार बिहान फेला परेको युवकको श व ३५ वर्षीय शाहिव हुैसनको रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने जयन्तीपुर रोड अलि म’स्जिद मुरादावादमा रहेको खुलेको छ । ****AB- सन्सार ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस ***,
अनुसन्धानका क्रममा उक्त श’व भारतको उत्तर प्रदेश जयंतिपुर मुरादावाद घर भइ भक्तपुर–१ स्थित दुवाल मेटल काराखानामा पित्तलको भाँडा बनाउने ३५ वर्षीय शा हिव हुसैनको भएको खुलेको थियो ।प्रहरीले ह’त्याको आ शंकामा उन का सा थी (सँगै काम गर्ने) सलमान खान र सानु अन्सारीलाई प’क्राउ गरेको थियो । प्रहरीले प’क्राउ प रेका दुवैजनासँग सो’धपुछ गरेपछि उनीहरु ब’स्दै आएको को’ठामा त लासी गरेको थियो । तलासीका क्र’ममा र’गत ला’गेको लु’गा र जु’त्ता फेला परेको थियो ।
महा’नगरीय प्रहरी परिसर भ’क्तपुरका अनु’सार दुवै जनाले शाहिवको ह’त्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार शनिबार मृ’तक शा हिव, सलमान र सा’नुले सँगै म दिरा से’वन गरेका थिए । म’दिरा’को न’शामा शा’हिवले सा’नुकी प्रे’मिका (गर्लफ्रेन्ड) का बारेमा अप’शब्द प्रयो’ग गरेप’छि विवाद बडे’को प्रहरी अनुस’न्धानबाट खु’लेको छ । शाहिवले आ’फ्नी प्रेमि’काका बारेमा अ’पश’ब्द बोल्न नछाडेपछि सलमान समेत मिलेर ढु’ङ्गाले हा’नेर शाहिवको ह’त्या गरेको सानुले प्रहरीलाई दिएको बयानमा बताएका छन् । प्रहरीले प’क्राउ परेका दुवैजनाविरुद्ध कर्तव्य ज्या’नको कसुरमा थप अनुस’न्धान अगाडि बढा’इएको जनाएको छ ।
भागरथीको आमालाई भेटेर रबि लामिछाने, दो’ षीलाई नछोड्ने भन्दै दिए यस्तो बाचा (भिडियो हेर्नुस्)
February 10, 2021 Ab-संसार